Ukutya kwamanqaku-Amanyathelo okuKwenza NGOKULUNGILE | Ukutya kukaNutri
Namhlanje kukho amakhulu ezidlo Ethembisa umntu ogqiba ekubeni ayilandele, iziphumo kwangoko nomthetho womzamo omncinci. Ziyaziwa njenge ukutya okungummangaliso, olu hlobo lokutya lunabachasi balo kunye nabakhuseli balo. Ngeli xesha ndizokuxelela malunga kwezona zidume kakhulu Loluphi udumo olukhulu: Amanqaku okutya.
Ngokuqinisekileyo uya kuba uve ngaye kwaye unomdla wokwazi ukuba iyasebenza okanye ikhona isiphumo esiyingozi sokubuya njengoko kusenzeka kwizidlo ezininzi zolu hlobo. Okulandelayo ndiza kukuxelela ngakumbi malunga noko kubandakanya Amanqaku okutya kwaye ukuba inokuhlelwa njengokutya okungummangaliso okanye ngaba uhlobo lwesicwangciso sokulahleka kobunzima obunempilo oko kuya kukunceda ukunciphisa umzimba kunye nokuphelisa ezo kilos zongezelelweyo.
1 Athini amanqaku okutya?
2 Ukungancedi kwamanqaku okutya
3 Ngaba kukutya okungummangaliso?
Athini amanqaku okutya?
Olu hlobo lokutya lusebenza kwi indlela eyahlukileyo neyantlandlolo ngokubhekisele kwezinye iintlobo zeendlela ezinciphayo. Ukutya ekuthethwa ngako ukutya kwamanqaku kuxhomekeke kwiiproteni, amafutha okanye iicarbohydrate eziqulathiweyo. Yonke into uyatya uyatya inothotho lwamanqaku, ekutyeni ngokubanzi okuneekhalori ezingaphezulu zinamanqaku amaninzi kunye neekhalori ezisempilweni kakhulu okanye ezincinci banamanqaku amancinci.
Umntu ngamnye ogqiba ukuqala olu hlobo lokutya, une uhlobo lwekhuphoni yemihla ngemihla ngamanqaku ahluka ngokuxhomekeka kwisini, ubunzima okanye ubudala bomntu othethiweyo. Nsuku zonke, umntu angatya ade afikelele uthotho lwamanqaku ubukhulu becala, kuya kufuneka ubhale phantsi kwaye ugcine umkhondo we amanqaku achithwe ukuze ungadluli kuloo mda. Amanqaku okutya akuvumela ukuba utye naluphi na uhlobo lokutya okoko umntu engadluli kumanqaku asetyenzisiweyo.
Ngokutsho abaxhasi bokutya okunjalo, ukuba ulandela imigaqo nemigaqo emiselweyo uyehla emzimbeni ngaphandle kwengxaki. Nangona kunjalo, akukangqinwa ukuba akwenzeki isiphumo esibuhlungu Ekugqibeleni kwaye yi-100% ye-a ukutya okunempilo kunye nokulinganisela. Ukuba umntu ogqibe ngempumelelo uthe ukutya, sukuyiguqula imikhwa yakho kwaye ulandele uhlobo lwe ukutya okunempilo kunye nokulinganisela, unokufumana ubunzima kwakhona.
Ukungancedi kwamanqaku okutya
Xa kuziwa ekwazini ukuba ukutya okudumileyo kwamanqaku ayinabungozi empilweni, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo ekhethekileyo kwiimpawu ekufuneka zinazo ukutya okunempilo nokulinganayo.
Kufuneka ufumane imali eseleyo phakathi kweekhalori ezingenisiweyo kunye nezo zichithwa imihla ngemihla. Ukuba zichithwe iikhalori ezimbalwa kunokuba utyisiwe, ukutya akuthembekanga okanye kucetyiswa, yiyo loo nto kuyingozi empilweni.
Yandisa ukusetyenziswa kwamafutha angaqinisekiswanga kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwe Amafutha agcweleyo kunye nenqatha ehambayo
Ukwanda kokutya okufana imifunoiziqhamo, amandongomane, iinkozo ezipheleleyo kunye iimbotyi.
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwe iswekile netyuwa kuzo zonke izidlo.
Ukuba ucacisa ezi nkcukacha kwi Amanqaku okutya, Ungajonga ukuba ikhona ukutya okuncinci kweekhalori kuba ukuba bekungenjalo, ngekhe kubekhona ukunciphisa umzimba. Ngokuchasene noko, ngokukhoyo inkululeko epheleleyo yokutya, kunokubakho ithuba lokuba umntu ungatyi nasiphi na isiqhamo okanye imifuno xa ulandela olu hlobo lokutya. Ukongeza koku, umntu angaqhubeka nokutya Igcwele okanye ithumele amanqatha oko kubi kakhulu emzimbeni wakho. Umgca wenyani kukuba malunga yokutya okungummangaliso oko kuya kukunceda ukunciphisa umzimba kwixesha elifutshane kodwa ekuhambeni kwexesha kuye isiphumo esiyingozi sokubuya eya kuthi ibangele ukuba ufumane i-kilos ezingaphezulu kunasekuqaleni kokutya.
Ngaba kukutya okungummangaliso?
Ukusuka kwisiseko sokuba Amanqaku okutya ayithembisi ukunciphisa umzimba ngexesha lokurekhoda ngokungathi benza ukutya okuninzi okungummangaliso. Olu hlobo lokutya luqinisekisa ukuba ulahlekelwa phakathi isiqingatha sekhilogram kunye neekhilo iveki, into esengqiqweni kwaye inokuba ngaphakathi kwesiqhelo kulo naluphi na uhlobo lwe Isicwangciso sokulahleka kwesisindo esifanelekileyo. Impumelelo yoku kutya kukuba ziyangeniswa iikhalori ezimbalwa kwabo batshisayo. Ke ukuba uyayenza ukhetho olufanelekileyo lokutya kunye nezondlo ufuna imihla ngemihla, akukho sizathu sokujonga amanqaku ekudleni njengokutya okungummangaliso.
Ukuba emva kokugqiba Kutsho ukutya, usahleli nohlobo lwe ukutya okunesondlo ngezondlo eziyimfuneko kwaye uyayizalisa ngokwenza umthambo mihla le, awuyi kuba nangxaki ukugcina ubunzima bakho kwaye ungabambi nayiphi na i-kilos elahlekileyo nge Amanqaku okutya. Enye inqaku lokudibanisa kolu hlobo lokutya, kukuba ayikunyanzeli ukuba uthenge izondlo kunye nokutya ukubuyekeza ukungabikho kwezondlo, kuba ngokutya kwamanqaku ungatya yonke into kwaye ayisusi nayiphi na izondlo ezibalulekileyo ukuba umzimba kufuneka usebenze kakuhle.
Ngamafutshane, Amanqaku okutya yindlela yokunciphisa umzimba ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kunezinye iintlobo zokutya ezinokubaluleka okukhulu ukutya ngokwamaqela kumaqela ahlukeneyo ngokweekhalori zawo kunye nokubaluleka kwazo kwisondlo. Ukuba uthatha isigqibo sokuqhubeka olu hlobo lokutya , kubalulekile ukuba utshintshe indlela otya ngayo ngekamva ukusukela oko kuthethwe ngenye indlela ukutya iya kuba ililize. Khumbula ukuba ulandela uhlobo lwe ukutya okunempilo kunye nokulinganisela uya kuphulukana nezo kilos zongezelelweyo zikukhathaza kakhulu kwaye uza kuzenza ngendlela yokuba awuyi kwenzakalisa Nokuba sempilweni okanye emzimbeni wakho.
Emva koko ndakubeka ividiyo echazayo malunga nokutya kokutya kunye nantoni iya kukunceda wazi ngakumbi yokutya okutshilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Amanqaku okutya
Iresiphi yekrimu yethanga
Ungalwa njani noxinzelelo lokuwa kunye noxinzelelo